Runtii waan soo noqonay
Bishii Febraayo 24, 2020, ka dib in kabadan hal bil oo go'doon ah, shaqaale kasta oo ka tirsan EBI wuxuu si nabad ah ku yimid shirkadda.
Markii aan xafiiska ku laabanno, shirkaddu waxay diyaarisay laba dhacdo oo gaar ah qofkasta. Kan ugu horreeya ayaa ah cunto qaybinta. Shaqaale kasta oo EBI ah wuxuu keenaa cunnadiisa ugu jecel inuu la wadaago qof walba.
Kadib markii aan wax cunnay, waxaan bilownay inaan qeybino gunno sanadka cusub ah. Qof kasta aad buu u farxay.
Warshaddeenu sidoo kale waxay bilaabaysaa inay dib u bilawdo shaqada iyo waxsoosaarkii hab nidaamsan si ay u buuxiso shuruudaha nidaamka macaamilka. Warshadu waxay si adag u adeecdaa tallaabooyinka fayadhowrka iyo badbaadada si loo hubiyo caafimaadka shaqaalaha wax soo-saarka, markaa ha ka welwelin dhibaatada fayraska, amar noo saar.
Hagaag, maalinta koowaad ee sanadkaan adag, waxaan kuu rajeynayaa caafimaad wanaagsan dhamaan 2020.
EBI waa soo saare xirfad-yaqaan ah baakadaha saaxiibtinimo ee Eco ee cuntada & cabbitaanka, qurxinta, saliidaha lagama maarmaanka u ah, dawooyinka, alaabta guryaha iyo warshadaha.
Baakadkeena aluminiumka ah wuxuu ka samaysan yahay 99.7% aluminium saafi ah taas oo ka dhigaysa mid dabiici ah, mid dib loo isticmaali karo, la qaadi karo iyo culeys fudud. Waxaan bixinaa tirada ugu balaaran ee xirmada aluminiumka (Dhexroor, dhirir, garbaha iyo qaababka), awooda ayaa la heli karaa 10ml ilaa 1000ml ama xitaa ka sii weyn.
RFQ ku soo dhowow inaad la xiriirto: